Budata Gravity Switch APK maka Android
Budata Gravity Switch
Free Budata maka Android (14.00 MB)
Budata Gravity Switch,
Site na mbinye aka nke Ketchapp, Gravity Switch bụ egwuregwu siri ike nke pụtara na ikpo okwu gam akporo ma na-achọ itinye uche, itinye uche na oge dị ukwuu. Ọ na-egosi na e mere ya ka a na-egwu karịa na ekwentị, dị ka egwuregwu niile nke onye na-emepụta ihe, ma ị nwere ike ibudata ya nefu ma kpọọ ya nenweghị ịzụrụ.
Nime egwuregwu ahụ, ị ​​​​na-agbalị ijikwa cube ọcha nke na-anwa ịfefe na ngọngọ nke nha dịgasị iche iche. Mgbe cube, nke nwere ike ịga nihu site na ịrapagidesi ike na ngọngọ, na-abịa na oghere, ọ bụrụ na ị nọ na ngọngọ elu, a na-adọta gị, ọ bụrụ na ị nọ na ngọngọ ala, a na-akwatu gị. Ị ga-elekwasị anya nke ọma ebe ọ bụ na cube enweghị okomoko nke ịwụ elu na ọ na-aga ngwa ngwa. Adokwala ọkwa isi ike egwuregwu ka ọ bụrụ ara ara.
Gravity Switch Ụdịdị
Nha faịlụ: 14.00 MB